Xog iyo Gorfeyn:- Maxaa keenay in liiska argagaxisada laga saaro Sheekh Mukhaar Roobow Abuu Mansuur? – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xog iyo Gorfeyn:- Maxaa keenay in liiska argagaxisada laga saaro Sheekh Mukhaar Roobow Abuu Mansuur?
Tan iyo markii ay soo shaac baxday in dowladda Mareykanka ay liiska argagixisada ka saartay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa waxaa soo baxaaya warar sheegaya in wadaadka uu damacsan yahay in maalmaha soo socdo uu si rasmi ah ugu soo biiri doonno dowladda federaalka Soomaaliya.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo haatan si rasmi ah aan loo ogeyn meel uu kaga sugan yahay dalka Soomaaliya ayaa ku jiray liiska argagixisada waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo hore lacag gaareysa 5 million dollar madaxiisa dul saartay.
Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa si weyn loo hadal haayay in Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur uu xiriiro kala duwan lasoo sameeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inkastoo aanan la ogeyn waxa ay labada dhinac kawada hadleen.
Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya oo si hoose ula hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in sababta rasmiga ah uu Mareykanka liiska argagaxisada ugu saaray Sheekh Mukhtaar Roobow ay ugu wacantahay dhiiro gelin la doonayo in lagu sameeyo saraakiisha kale ee mayalka adag ee cabsida qaba.
Saraakiishaasi Al-shabaab oo badankooda jeclaan lahaa in cafis loo fidiyo ayaa hadane waxay ka cabsi qabaan in hadii ay isku soo dhiibaan dowladda federaalka Soomaaliya in loola dhaqmo sida haatan loola dhaqmo wadaadka caanka ah ee Sheekh Xasan Daahir Aweys.
Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa in muddo ah xabsi ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana weli xal loo weysan yahay arrintiisa, kadib markii uu ku adkeystay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin mabda’a uu aaminsan yahay.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo haatan ah wadaad dhex-dhexaad oo qunyar u socod ah ayaa gebi ahaan isaga baxay kooxda Al-shabaab, kadib markii ay isku dhaceen hoggaamiyihii hore ee Al-shabaab Axmed Cabdi Godane, kaas oo dilay qaar ka mid ah madaxdii sare kadib markii ay ka horyimaadeen amaradiisa.
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaan haatan la ogeyn meel uu jaan iyo cirib dhigay, marka laga reebo warar sheegaya inuu ku dhuumaaleysanayo deegaano ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool.
FG:- Xogtaan waxay u gaar tahay warbaahinta Bulshoweyn